के निन्द्रामा घुर्ने समस्या रोग हो ? ? यस्तो छ समाधान - ramechhapkhabar.com
के निन्द्रामा घुर्ने समस्या रोग हो ? ? यस्तो छ समाधान
कतिपय मानिसमा सुत्दा घुर्ने बानी हुन्छ । यो समस्याले स्वयं व्यक्तिलाई भन्दा पनि सँगैको अर्को मानिसलाई बढी असर पुर्‍याउँछ ।
किन घुर्छ मानिस ?
घाँटी र नाकको श्वास नली अप्राकृतिक ढङ्गले टालिन्छ वा बन्द हुन्छ । तब साँघुरो नलीबाट छिटो हावा पार हुने क्रममा घुरेको आवाज आउँछ। यही घुर्ने समस्याले धेरैलाई अप्ठेरोमा पार्दछ ।
यसबाट छुटकारा पाउन के गर्ने ?
– अत्यधिक धूम्रपान, मद्यपान र लागु औषधबाट टाढा रहने । – नियमित रूपमा व्यायाम गर्ने । – प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने । – सुत्नु अघि ३ घण्टा अगाडी खाना खाने । – खानामा कम मसला, चिल्लो, पिरो खाने । – सुत्दा उत्तानो परेर नभई कोल्टे परेर सुत्ने । – मोटोपन घटाउने । – राती सुत्दा झ्याल वा भेन्टिलेसनबाट थोरै हावा आवतजावत हुन दिने । – अत्यधिक घुर्ने समस्या भए चिकित्सकको परामर्श लिने ।
तपाई कागती पानी कतिको पिउनु हुन्छ ? यदि पिउनु हुन्छ भने खुसीको खबर । कागती पानी पिउनेहरूले नपिउनेको तुलनामा धेरै स्वास्थ्य लाभ पाउँछन् ।
कागतीमा भिटामिन ‘सी’ पर्याप्त मात्रामा पाइने भएकाले यसको सेवनले छाला स्वस्थ र चम्किलो हुन्छ । यति मात्रै हैन, शरीरमा स्फूर्ति पनि बढ्छ । कागती पानी पिउनुको धेरै फाइदा भनेको तौल घटाउन सहयोग पुग्नु हो । अरु के के छ त फाइदा –
– बिहान बिहान कागती पानी सेवन गरेमा यसले प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउँछ । – कागती पानीको सेपनले रक्तसञ्चारसँग जोडिएका समस्यामा लाभ पुग्दछ । – आँखाको समस्याबाट बच्न पनि कागती पानीले लाभ पुर्याउँछ ।
– मधुमेह रोगीकालागि समेत कागती पानीले फाइदा गर्छ । – खाली पेटमा कागती पानी पिएमा शरीरबाट विषालु पदार्थ निष्कासनमा सहयोग पुग्छ । – कागती पानी पिएमा शरीरमा खतरनाक ब्याक्टेरियाको विकास र वृद्धि रोक्न सहयोग पुग्छ । – रुघाखोकीको उपचारमा कागती पानीको सेवन उपयोगी हुन्छ ।
– मस्तिष्कलाई पोषित गर्न र स्नायुकोषहरू स्वस्थ राख्न कागतीले सहयोग गर्छ । – कागतीले घुँडा र जोर्नीहरूको पीडा कम गर्छ साथै युरिक एसिडलाई विघटित गरिदिन्छ । – एन्जाइम प्रदान गरेर कागतीले कलेजोलाई पनि स्वस्थ राख्छ । – कागती पानीले कलेजोमा अक्सिजन र क्याल्सियमको मात्रा सन्तुलन गर्छ । – हरेक दिन कागती पानी पिएमा मिर्गौलामा पत्थरी बन्न पाउँदैन । – कागती पानीको नियमित सेवनले पत्थरीलाई विघटित पारेर बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ ।